नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा आयुर्वेद र एलोपेथीको एकीकृत आकस्मिक सेवा – Health Post Nepal
नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा आयुर्वेद र एलोपेथीको एकीकृत आकस्मिक सेवा
२०७५ फागुन ६ गते १५:२५
नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले आकस्मिक उपचारसेवा सुरु गर्ने भएको छ । मूलतः आयुर्वेदिक उपचारपद्धतिअन्तर्गत रही रोगको प्रकृति र बिरामीको अवस्थाअनुसार एलोपेथिकतर्फको समेत सेवा उपलब्ध गराउने गरी छिट्टै आकस्मिक सेवा सुरु गर्न लागिएको चिकित्सालयले जनाएको छ । आकस्मिक कक्षमा आयुर्वेदिक र एलोपेथिक दुवै चिकित्सकले मिलेर सेवा दिने अस्पतालले जनाएको छ ।
चिकित्सालयका निमित्तनिर्देशक श्यामबाबु यादवले आकस्मिक सेवा सञ्चालनका लागि करिब–करिब सबै तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीले आकस्मिक कक्ष सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौँ,’ उनले भने । उपकरणहरू जडान गर्न, एलोपोथिक चिकित्सक ल्याउन, चिकित्सक, कविराज, वैद्य तथा अन्य कर्मचारीलाई तालिम दिन केही समय लाग्ने यादवले बताए । आकस्मिक वार्डको निर्माणको काम भइरहेको छ भने एलोपोथिक चिकित्सक ल्याउन मन्त्रालयमा कुरा भइरहेको यादवले जानकारी दिए । एलोपोथिक चिकित्सक लोकसेवामार्फत ल्याउने कि अन्य माध्यमबाट भन्देबारे भने निधो भइनसकेको उनले बताए । व्यवस्थापनको काम पूरा भइसकेपछि छिट्टै आकस्मिक सेवा सुरु गर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
मिश्रित आकस्मिक उपचारसेवा
एलोपोथिक र आयुर्वेद दुवैका आकस्मिक उपचारसेवालाई मिश्रित रूपमा प्रयोग गर्ने योजना नरदेवी चिकित्सालयको छ । नेपालको चिकित्साक्षेत्रमा प्राचीनतम आयुर्वेदिक उपचारपद्धति र अत्याधुनिक एलोपोथीको यस्तो मिश्रित सेवा सम्भवतः नौलो प्रयोग हुनेछ । सामान्यतया प्राचीन आयुर्वेदिक उपचारपद्धतिमा आकस्मिक सेवा नदिइने आमबुझाइ छ । यसलाई चिर्दै चिकित्सालयले आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । आयुर्वेदले पनि आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न सक्छ र यसको शास्त्रीय र परम्परागत व्यवस्था छ भन्ने कुरा गरेर देखाउन र यसको लाभ बिरामीलाई पुर्याउन सेवा सुरु गर्न लागिएको डा. यादवको भनाइ छ ।
आकस्मिक सेवाका लागि अक्सिजन सिलिन्डर, इसिजी मेसिन, सुचिङ मेसिन, डिफिरेक्टर कार्डियोमोनोरेक्टर मेसिन, अम्बुज पम्पजस्ता आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरू ल्याइएको डा. यादवले जनाएका छन् । ‘आकस्मिक उपचारमा काम आउने पहिले नै भएका केही मेसिनहरू प्रयोगविहीन भएर खेर जाने अवस्था थियो,’ डा. यादवले भने, ‘अब तिनको पनि सदुपयोग हुने भएको छ ।’
सुरुमा १०–५ दिवा सेवा, बिस्तारै २४ घण्टेमा विस्तार
चिकित्सालयले सुरुवाती चरणमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्र आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ । पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने भएका कारण प्रारम्भमा दिउँसोको कार्यालय समयमा मात्र आकस्मिक सेवा सुरु गर्न लागिएको हो । आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएपछि भने २४सै घण्टा सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सालयको योजना छ ।
अस्पतालले हाल १ सय २० बेडमार्फत सेवाप्रवाह गर्दै आएको छ । चिकित्सालयबाट दैनिक सयदेखि १ सय ५० जनाले बहिरंग सेवा लिँदै आएका छन् । चिकित्सालयमा हाल पञ्चकर्मसहित दुईवटा अन्तरंग सेवा उपलब्ध छन् । अस्पतालले शल्यक्रिया, ल्याब, एक्स रेलगायत सेवा दिँदै आएको छ । चिकित्सालयमा ४ जना विशेषज्ञसहित जम्मा १९ जना चिकित्सकले सेवा दिँदै आएका छन् । ओपिडीका लागि अस्पतालले ६ वटा कोठा उपलब्ध गराएको छ । कायचिकित्सा विभाग, जनरलचिकित्सा विभाग, शल्यशालक्य विभाग, बालरोग विभाग, स्त्री तथा प्रसूति विभागमार्फत चिकित्सालयले बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको छ ।नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय प्रतिष्ठान बन्ने प्रक्रियामा छ । प्रतिष्ठान बन्ने प्रक्रिया करिब–करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अस्पतालले जनाएको छ ।
नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय
गरिब देशबाट ठूलो संख्यामा ‘नर्स’ ल्याउँदै धनी देश, विश्वकै स्वास्थ्य व्यवस्थामा गम्भीर असर
चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्न डा. केसीको चेतावनी
जवानीमै बुढो देखाउने यी कारणबाट टाढै बस्नुस्
‘बारम्बार दिइने बुस्टर डोजले रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर बनाउँछ’
सफल यौनसम्पर्कको सत्रु ‘मोटोपन’
घरमा कसैलाई कोरोना संक्रमण भए के गर्ने?
चिसो मौसममा उच्च रक्तचापको जोखिम बढी, सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव
चिसो बढेसँगै छालामा संक्रमणको खतरा
मस्तिष्कघात र डिमेन्सियाको जोखिम कम गराउँछ चिया र कफीले